🤗 ( ၅၈ ) လမ်းမကြီးတင်အရောင်း 🤗
🤗 ( ၅၈ ) လမ်းမကြီးတင်အရောင်း 🤗 * မန္တလေးမြို့ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် * Code no . S- 329 * ( ၅၈ ) လမ်း x စံပြလမ်းဒေါင့် * အနောက်လှည့် ၊ တောင်လှည့် * ပေ ( ၁၂၀ x ၉၀ ) ၊ အုတ်တံတိုင်းပတ်ပတ်လည်ခတ်ပြီး * ဈေးနှုန်း သိန်း ( ၆၅၀၀ ) ၊ ( ညှိနှိုင်း ) * ...
S - ( 262 )
S - ( 262 ) မြို့နယ် - ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် လမ်း - လမ်း ( ၆၀ )(A )လမ်းတင် ,ရတနာx စံပြလမ်းကြား ပေအကျယ် - ပေ ( ၆၀ x ၄၅ ) အလှည့် - အရှေ့လှည့် ပါဝင်ပစ္စည်း - နံကပ် ( ၁ ) ထပ် ဈေးနှုန်း - သိန်း ( ၁၄၀၀ ) ...
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တိုက်ခန်းရောင်းမည် 🏩 သိန်း - 530 💰တာင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် 13_ရပ်ကွက် ရတနာလမ်းမကြီးအနီး သုမင်္ဂလာလမ်းမကြီးအနီး 14/15 လမ်းဆုံအနီး မာဃလမ်းသွယ် လမ်းသွယ်_လမ်းသန့်_လမ်းကျယ် အကျယ် - 18' × 54' ပေ မြေညီအပေါ်ထပ် , ပထမထပ်( မှန်ခန်း), High ...
# 35 /ရပ်ကွက်မှာ နှစ်ထပ် RC * ဈေးတန်တန်လေး *
# 35 /ရပ်ကွက်မှာ နှစ်ထပ် RC * ဈေးတန်တန်လေး * # လောပိတလမ်း ဒဲ့ပေါက် ကွန်ကရစ်လမ်းကျယ်ပေါ် # $$$ ဈေးနှုန်း = 900 သိန်း %%%%% ______________________________________ # ပေ (20×60) , နှစ်ထပ် RC တိုက်သစ် # နှစ် ၆၀ ဂရံမြေ လက်ရှိပိုင်ရှင် ...
နေရာကောင်းmini condo အမြန်ရောင်း/ငှား******
နေရာကောင်းmini condo အမြန်ရောင်း/ငှား****** ~~~~ သူရလမ်းမပေါ်/9ရပ်ကွက်/တောင်ဥက္ကလာ ~~~~~ ~19*55 ~8 Fl ~2SBR ~တအိမ်လုံးကျွန်းပါကေးခင်းကြွေပြားကပ်အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ~bcc/metreကျပြီး ~lift/transformer/generator ~လက်ရှိပစ္စည်းစုံအပါ ***အရောင်း*770 ...
Grand Sayar San Condo for sale
Grand Sayar San Condo for sale Nwar Sayar San Road, Myanmar Plaza and Pearl Condo, Sayar San Lan Thwel, Yankin. ^ 1680 sqft ^ 1 M ^2S ^ Perquet floor ^ Hight floor ^ Swimming pool ^ Gym ^ Ground Carpark ^ 24hr security Sale - 2600 Lakh ( can ...
🎉 🎉 သိန်း(၁ဝဝ) တိတိလျှော့ချလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ... 🎉 🎉
🎉 🎉 သိန်း(၁ဝဝ) တိတိလျှော့ချလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ... 🎉 🎉 🤔 🤔 ယခင်ခေါ်ဈေး - သိန်း (၁၈၅ဝ) 🤗 🤗 ယခုခေါ်ဈေး - သိန်း (၁၇၅ဝ) (ညှိနှိုင်း) <<<<<<<<<•••>>>>>>>>> အကြောင်းအရာ (topic) ⤵️ ⤵️ --------------------- နေထိုင်ရန်နှင့် 🏦 🏦 ဘဏ် ၊ 🏥🏥 ဆေးခန်း ...
သာကေတမြို့နယ် ​၊ -ပေ၂၀×ပေ၆၀ -အိမ်နှင့်ခြံ -​ရောင်း​ဈေးနှုန်း သိန်း (590) ကျပ် ဆက်သွယ်ရန် စံရတနာမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် - 09782165088 , 09262555437 , 09263256668 Viber - 09782165088 , 09263256668 ...
Marketed by စံရတနာမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိူးဆောင် ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ​၊ -ပေ၂၀×ပေ၆၀(မြေပိုပါ) -အိမ်နှင့်ခြံ -ဂရမ်မြေ ၊ ရေမီးအစုံပါသည်။ -​ရောင်း​ဈေးနှုန်း သိန်း (700) ကျပ် ဆက်သွယ်ရန် စံရတနာမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် - 09782165088 , 09262555437 , 09263256668 Viber - 09782165088 , 09263256668 ...
အင်းစိန်မြို့နယ် ​၊ -ပေ၁၅×ပေ၃၀ -တစ်ထပ်တိုက် -ကြွေပြားခင်းပြီး ၊ ပြတင်းပေါက်သံဗန်းတပ်ထားသည်။ -​ရောင်း​ဈေးနှုန်း သိန်း (290) ကျပ် ဆက်သွယ်ရန် စံရတနာမြေ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် - 09782165088 , 09262555437 , 09263256668 Viber - 09782165088 , ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?page=116